Xiaomi waxay beenisay inay tahay "shirkad millatari oo shiineys ah oo shiineys ah" | Androidsis
Xiaomi way iska difaacday Mareykanka waxayna beenisay inay tahay «shirkad millatari Shiinaha shuuciya»
Waxaa jira jawi xoogaa mugdi ah oo kujira warshadaha casriga ah hadda, waana inay kudhacdaa ficilkii dhowaan Mareykanku ku dhawaaqay ee ku saabsan Xiaomi, waa shirkadda saddexaad ee soo saarta moobiilka adduunka ka dib Samsung iyo Huawei.
Haddii ay dhacdo inaadan weli ogaan, maamulka Trump iyo Wasaaradda Amniga ee Waqooyiga Ameerika waxay liiska madow ku qariyeen Xiaomi inuu yahay «shirkad millatari oo shuuciya Shiinaha ah», adigoon bixin faahfaahin badan oo ku saabsan. Shirkaddu, sidii la filayay, waa ay falcelisay, waxayna ku samaysay iyada oo loo marayo bayaanka aan hoos ku tusayno.
Xiaomi waxay sheeganeysaa inaysan xiriir la lahayn dowladda Shiinaha
Hadda Mustaqbalka Xiaomi ee suuqa casriga iyo warshadaha xoogaa lama huboHagaag, wali majiraan faahfaahin badan oo ku saabsan talaabooyinka uu Mareykanku ku dabaqi doono shirkada, laakiin waxay umuuqataa inay ka adkaan doonaan kuwa ay soo martay Huawei tan iyo 2019. Waana horeyba uga faallay inay macquul tahay kuwan waxaa ka mid ah ka tag Xiaomi iyadoon suurtagal ahayn isticmaalka Adeegyada Google, iyo kuwo kale.
Si la mid ah, wax kastoo ay tahay, Xiaomi waxay u hoggaansameysaa ka tagista booskeeda oo la beeray, taas oo ay ku xaqiijineyso inaysan ahayn qalab dowladda Shiinaha, ka fog. Waa tan bayaanka laga soo saaray Xiaomi ilaa Hay'adda Android:
“Shirkaddu waxay u hogaansantay sharciga waxayna ku shaqeysay si waafaqsan sharciyada iyo xeerarka ku habboon ee maamullada ay ka ganacsato. Shirkaddu waxay mar kale ku celineysaa inay siiso wax soo saar iyo adeegyo loogu talagalay isticmaalka madaniga iyo ganacsiga. Shirkaddu waxay xaqiijineysaa inaysan laheyn, maamulin ama xiriir la lahayn millatariga Shiinaha, mana ahan "Shirkadda Milatariga Shiinaha ee Shuuciga ah" oo lagu qeexay hoosta NDAA. Shirkaddu waxay qaadi doontaa tallaabooyin ku habboon si loo ilaaliyo danaha shirkadda iyo saamilaydeeda.
Shirkadda ayaa dib u eegeysa cawaaqibka ka dhalan kara tan si ay u horumariso faham buuxa oo ku saabsan saameynta ay ku leedahay Kooxda. Shirkaddu waxay sameyn doontaa ogeysiis dheeri ah markay habboon tahay. "
Horumarka sheekadan waa la arki doonaa. Waxaan runtii rajeyneynaa in natiijada ay fiicantahay oo ay dhowaan timaado Xiaomi, laakiin wax walba waxay muujinayaan in tani ay noqon doonto mowduuc ballaaran oo aan taaban doonno inta lagu jiro 2021-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Xiaomi way iska difaacday Mareykanka waxayna beenisay inay tahay «shirkad millatari Shiinaha shuuciya»
Taariikhda sii deynta Sharafta V40 ayaa dib loo dhigay illaa 22-ka Janaayo